मोटरसाइकल किन्न गएको ब्याक्तिलाइ भिखारी ठानेर बाहिर निकाल्दिए, यथार्थ थाहा पाएपछि सबैले हात जोडेर माफी मागे – Annapurna Daily
No 1 News portal From Nepal in Nepali
Annapurna Daily - No 1 News portal From Nepal in Nepali
On Jun 15, 2021 90
एजेन्सी । भनिन्छ, मानिसको पहिचान उसको मनबाट गर्नुपर्दछ, तनबाट होइन । साथै उसको पहिचान कपडा हेरेर गर्न हुँदैन । संसारमा त्यस्ता धेरै मानिसहरु छन्, जो धनी भएपनि देखाउन चाहँदैनन् र सामान्यरुपमा नै हिँडिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता मानिसहरुलाई अधिकांशले भिखारी सम्झिन्छन् र आफ्नो घमण्ड देखाउन थाल्छन् ।
यस्तै एउटा घटना एक व्यक्तिको जीवनमा पनि घटेको छ । यो घटना थाइल्याण्का एक ठूला बिजनेशम्यानको हो । उनी एक करोडपति व्यक्ति थिए । तर उनलाई पुरानो कपडा मन पर्दथ्यो र उनी त्यहि कपडा लगाएर हार्ले डेभिडसनको शोरुममा गएका थिए ।
त्यहाँ गएर उनले नजिकै रहेको एक मोटरसाईकलको मूल्य सोधे । तर पुरानो कपडा लगाएकै कारण बाइकको बारेमा सोरुममा रहेका व्यक्तिले बोल्न उचित ठानेनन् र बाहिर जान बताए । उनले नमानेपछि कर्मचारीहरुलेम्यानेजरलाई बोलाए ।
म्यानेजरले पनि उनको कपडाबाट मूल्याङ्कन गरेर उनलाई बाहिर जा भन्दै चि’च्याउन थाले । जब ति व्यक्तिले उक्त बाइकको मूल्य सोधेर सबै पैसा र केहि टिप्स समेत झिके तब सबै छक्क परे उनलाई उक्त बाइकको १२ लाख मूल्य भनेकोमा उनले सबै निकालेपछि त्यहाँ रहेका सबै अचम्मित बने ।
उनको बारेमा पछि सत्यता खोल्दै जाँदा उनी एक ठूला बिजनेशम्यान भएको कुरा पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ रहेका कर्मचारी र म्यानेजरले पनि उनीसँग माफी मागेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,असोज ०९ गते शनिबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
खाना खानेबित्तिकै पेट दुख्छ ? सा’वधान: हुनसक्छ यस्तो गम्भीर सम’स्या
यस कारण गरिन्छ शिवलिंगको पूजा ! यस्ताे छ धार्मिक र आध्यात्मिक मान्यता
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,असोज ८ गते शुक्रबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिकबाट छुटकारा !
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,असोज ७ गते बिहिबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
यति सक्षम हुनुहोस् की जहाँ उभिनु हुन्छ तपाई त्यहाँ कोही पनि बसिरहन नसकोस् – मनछुने भनाईहरू
स्वस्थ भएर लामो आयु बाँच्न बिहान के गर्न हुदैन र के गर्नु पर्छ ? सबैले जानीराखौं
टाउको दुख्ने सम’स्या छ ? उसोभए झुक्किएर पनि नखानुहोला यस्ता चिज !
© 2021 - Annapurna Daily. All Rights Reserved.